गफ ! .....: गफ निबन्ध : मेरी छोरीको कुरा
Posted by दीपक जडित at 1:54 PM
धेरैमा तपाईंको कुराहरु पढ्न पाइयो, खुशी लाग्यो। तपाईं त जहाँ गयो तेही बेपतबेपत्ता, किन हो एस्तो। छोरी को कला देखेर म पनि मक्ख भए। सारो राम्रो कला पेन्तिङ त। अरु सबैकुर बिर्सेंर छोरीलाई सक्दो समय दिनुहोल। मेरो पनि आशिर्बाद भनिदिनु।
i love it..........ani i think there (india) and nepal education system is different thats why your daughter may can image diffrent things but that true children are children and they are creative .......
अति रमाइलो र स्वच्छ भावनाले बाबा छोरीको यात्रा संगै ज्ञान-गुनका कुराहरुलाई प्रस्तुत गर्नु भयो दीपक जी ।
नानुको प्रतिभाले शिखर चुमोस मेरो कामना नयाँ बर्ष संगै ।
दिपक जी को कबिता जस्तै शुन्दर छ छोरीको पेन्टिंग .
कुनै शान्त र सुन्दर उद्यानमा विचरण गरीरहेजस्तो लाग्यो यो लेख पढिरहँदा। दैनिक जीवनका साना-साना कुराहरुलाई केलाएर जीवन दर्शनको गहनतालाई प्रष्ट्याउनुभएको छ। पितृवात्सल्यले ओतप्रोत छ पूरै लेख।
छोरीलाई मेरो पनि शुभकामना, सफल र सुखी जीवनको!
हराएको कारण त ब्लगले नकहे पनि थाहा थियो । अझ अरू कुराहरू मनोवाद शैलीको यो लेखोटले सचित्र ल्यायो । कति साना-मसिना कुरा खुट्याएर मजाले बुन्न सक्नुभएको । खासमा बाबा बनेपछि यसैगरी सन्तानको बालापनसँगै मिसिएर अर्थ र सन्दर्भहरूमा पनि मिहिन बुझाइ हुनजान्छ होला ।
पानीफोका, आईबी राईको घरछेउ, चित्रकारितामार्फत पहिचानको सोच दिने सिलसिला र सन्दर्भहरू पढ्दा सामान्य तर बुझ्दा गहन लागे । 'एक हातको ताली'बाट छोरीले अर्कै आविष्कार गरिछन्, यसैमा पनि आफ्नो नाम राख्‍न सुहाउने जस्तो । कलाको गुन छोरीमा पनि सर्दै गएको ठम्याएँ मैले ।
खुब रमाइलोपूर्वक बितोस् त्यहाँ आगामी पल पनि ।
बाबु- छोरीको प्रेमको गाथा छोटै भएपनि धेरै रमाईलो र गहिरो लाग्यो । छोरीको सफलताको कामना सहित !